5 Ndi Nwanyi Na-amalite Na Nigeria
5 Ndi umuaka ndi nwanyi malitere na Nigeria
Ihe ịma aka 4 maka mmalite dị ka Fintech 2021 na-amalite Taa
Tinye: Ihe GoGettaz Agripreneur nke ndị na-eto eto n'Africa ($ 50,000)
Ihe egwu di iche iche di iche-iche na otu Facebook ga - esi kwụsị
Ndị ọchụnta ego? Yunus & Youth Global Fellowship tinye akwụkwọ maka 2021
Mụ agbọghọ nọ na ICT Day 2021: ụmụ nwanyị Africa 4 nwere mmetụta na ICT na-akwalite Nsonye malemụ nwanyị
20 awa gara aga
Audiomack mmekọ MTN, awade Music gụgharia karịrị 76 nde ndị debanyere aha
22 awa gara aga
Huawei: imchọta Pọtụfoliyo iji bulie ntụkwasị obi azụmaahịa
23 awa gara aga
Mụ agbọghọ nọ na ICT Day 2021: ingmepụta Ọgbọ Ndị Na-esote Ndị Nwanyi
24 awa gara aga
Sophos weputara XGS Series Firewall Appliances iji bulie Nchedo megide Cyberattacks
Onye guzobere Institute Lagos mere ka a mara ọkwa Ifedy Eze dịka onye isi nchịkwa
Onyinye Trendupp na-ekwupụta Oku maka Nhọrọ
DAAYTA 2021 mechie dika ogwe aka na-egosi 12m Grant Winner
Techmụ nwanyị Tech
by Onye edemede Guest
Ebe E Si Nweta: UN.org
A na-ekwu na mbido bụ azụmaahịa nwere ihe atụ nwere ike ịhagharị ma na-ekwughachi ya, na ụfọdụ isi mgbe ị gafere ọkwa uto ma ka na-azụ ahịa ndị a na-aghọ ụlọ ọrụ. N’ime afọ iri gara aga, mbawanye bidoro gbalite elu na mba ụwa.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ụmụ nwanyị amalitela ma duzie ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmalite ndị a, ndị mmalite ndị a na-eme ihe ịtụnanya na gburugburu ha.
Site na ngalaba ahụike na ngalaba gburugburu na ọbụlagodi ego, ụmụ nwanyị a mere akara dị ịtụnanya.
E depụtara n'okpuru ebe a ụmụ nwanyị ise nwe ma duru ha mmalite na Nigeria nke pụtara n'ahịa ha,
Nke a bụ mmalite fintech na-enyere ndị mmadụ aka ịchekwa ego nwere ọmụrụ nwa pasent. Onye nchoputa site n'aka Odunayo Eweniyi na umu nwoke ibe ya nwoke na Mahadum Co adehun ma na-eje ozi ugbu a dika onye isi oru na PiggyBank.ng
Ebe E Si Nweta: Endeavournigeria.org
Ikpokobi PiggyBank nwere ihe pụrụ iche nke na - enyere aka ịkụnye ịdọ aka na ntị na ndị ahịa ha ma ndị mmadụ enweela ekele maka ya kemgbe ọtụtụ afọ.
PiggyBank na-ebo ebubo pacenti na ndọrọ ego emere n’ụbọchị ndị ewepụtaghị n’elu ikpo okwu ha, ma n’elu ikpo okwu nwere mkpụrụ ụbọchị anọ ewepụ kwa afọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ịtụnanya na onye edemede a amaghị ihe ọzọ.
Ntọala ya na 2012 site n'aka Bilikiss Adebiyi-Abiola, onye na-ejide MBA gụrụ akwụkwọ na MIT a ma ama.
Bilikiss kwuru na o mepụtara echiche maka mbido a mgbe ọ ka na-agụ akwụkwọ ebe ahụ wee laghachi Naịjirịa iji mejuputa ya.
Ebe E Si Nweta: Sheleadsafrica.com
Ruo mgbe a họpụtara ya Lagos State Parks na Gardens Agency General Manager, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke WeCyclers.
WeCyclers na-enye ọrụ mmegharị maka ọfịs na ezinụlọ dị na Nigeria ọkachasị Lagos bụ ebe obibi mmalite a.
Mmalite a nwere ebumnuche nke inyere ndị mmadụ na obodo ndị na-emepeghị emepe aka na mba ndị ka na-emepe emepe idozi nsogbu mkpofu mkpofu ha ma nweta ụgwọ ọrụ site n'ime nke a.
Na-agụkwa, Ndi nwanyi ndi nwanyi ndi Afrika abughi 8 mebere ego na 2020
WeCyclers na-eji igwe eji okirikiri emegharị emegharị emegharị maka mkpokọta mkpofu na ezinụlọ ndị na-ekpofu ha ka a na-enye isi nke mgbe ha mechara ka oge na-enweta ha ihe sitere na ihe oriri na ngwaahịa nhicha.
Ihe a bu HealthTech bidoro na 2016 nke Temie Giwa-Tubosun dere. LifeBank lekwasịrị anya n'ịhụ ebe nlekọta ahụike na ndị ọrịa nwere ohere ịnweta ọbara maka mmịnye ya ozugbo enwere ike mgbe ọ bụla achọrọ.
Ebe E Si Nweta: Thebelt, ng
LifeBank na ndị ọrụ afọ ofufo na-arụkọ ọrụ ọnụ, ụlọ akụ ọbara na ụlọ ọgwụ na-ahụ na enwere ọbara na-adịgide adịgide. LifeBank na-arụkwa ụlọ ọrụ lọjistik n'akụkụ iji nwee ike ibugharị ọbara a.
Ndị dọkịta na-efe efe Nigeria
Nke a bukwa mbido ahụike, nke Ola Orekunrin bu dibia bekee. Ndị dọkịta na-efe efe bụ ọrụ ụgbọ ala ụgbọ elu nke ndị dọkịta na-agba, iji nye enyemaka mbụ dị mkpa na ikuku ọbụlagodi mgbe ha na-aga ụlọ ọgwụ.
Ebe E Si Nweta: Influential-women.com
Ola, onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum York, UK, bidoro ndị dọkịta na-efe efe mgbe nwanne ya nwanyị nwụnahụrụ ya n'ihi njem njem na-egbu oge n'oge nsogbu ọrịa ana-arịa ọrịa sickle cell n'ihi ụlọ ọgwụ ndị dịnụ enweghị ike ijikwa nsogbu ahụ.
Ndị dọkịta na-efe efe Nigeria bụ ndị ọrụ ụgbọ ala ụgbọ ala mbụ na West Africa.
Nke a bụ mmalite ọhụụ ọhụụ na-anaghị enye ọrụ teknụzụ, ha na-enyekwa ọrụ ndozi ụlọ ma na-esetịpụ ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ha na nkeji nke abụọ nke afọ a nke onye nwe ụlọ ma ọ bụ onye nwe ụlọ na-enyocha onye nwe ụlọ ahụ. ma ọ bụ tenant.
Ebe E Si Nweta: Technext.ng
iBez nke Ommo Clark guzobere na-eme ihe dị ịtụnanya na teknụzụ okike, ọ bụghị naanị imepụta ngwaahịa sọftụwia ọ na-azụkwa ndị mmadụ ma gosipụta talent ndị a mgbe a zụlitere ha.
Chibuzor Elizabeth Chijioke onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Abia State bụ nwa amaala Naijiria nke na-ede akwụkwọ na ọdịnaya na-ede akwụkwọ. Ọ zụrụ azụ dị ka onye na-ere ahịa dijitalụ na Innovation Growth Hub. Ọ na-agba mbọ ịkụziri ndị mmadụ otu esi etinye teknụzụ iji mee ka ndụ na azụmaahịa ha ka mma. Ọ na-eji oge ezumike ya agụ sci-fi na fantasy novels.
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Idenye aha na teknụzụ kwa izu maka mmelite.
Earthbọchị 2021wa 5: XNUMX Nigerian Startups championing a Sustainable World
Nigerian Edtech Startup Afrilearn na eme ka E-mmụta bara uru na Africa
Kwik Nyefee na-ebupụta ngwa mgbakwunye ọhụụ iji mee ka ọnụego mbupu oge gafere
Onye oru ugbo zuru oke na-etinye Technologies Satellite iji mụbaa Chain Value Agriculture
Banye maka mmelite
Weebụsaịtị a na-eji kuki. Site n'ịnọgide na-eji weebụsaịtị a, ị na-enye nkwenye maka iji kuki a. Gaa na anyị Nzuzo Nzuzo na Kuki.